10 Ciyaartoy Oo Raadinaya Kooxo Ay Ku Biiraan
HomeWararka Maanta10 Ciyaartoy Oo Raadinaya Kooxo Ay Ku Biiraan
Kooxaha Chelsea, AC Milan, Bayern Munich iyo PSG, waxay halis ugu jiraan inay waayaan ciyaaryahanno wanaagsan oo aan doonaynin inay usii ciyaaraan, isla markaana ku biiraan kuwo kale.
Shabakadda ciyaaraha ee CADALOOL waxay halkan kusoo gudbinaysaa 10 ciyaartoy oo dabada ka riixaya in kooxahoodu ogolaadaan inay ku biiraan naadiyo kale iyo kuwo kale oo ay naadiyadii ay u ciyaarayeen usheegeen inay raadsadaan meel ay ka ciyaaraan oo aan boos loo haynin.
Weeraryahanka Chelsea ayuu bustihiisu dibedda yaallay intii uu dhamaaday xili ciyaareedkii hore, markaas oo tababare Antonio Conte uu farriin gaaban oo uu telefoonka ugu diray ugu sheegay in uu raadsado koox uu u ciyaaro, isla markaana aanay jirin boos ay Chelsea u hayso. 28 jirkan ayaa ka caawiyey Chelsea inay xili ciyaareedkii tegay ku guuleysato horyaalka Premier League, isagoo u dhaliyey 20 gool, laakiin xidhiidhka uu la lahaa Conte ayaa khasab ka dhigay in loo sheego in dhaqankiisa xun aan laga aqbali karin kooxdaas.
2. Jese Rodriguez (PSG)
Qaybtii hore ee xili ciyaareedkii hore, Jese waxa uu PSG u ciyaaray 368 ciyaarood, laakiin tababare Unai Emery ayaa ku qanci waayay, waxaanu heshiis amaah lix bilood ah ugu wareegay Las Palmas. Markii uu dhamaaday wakhtiga amaahda ah ee Las Palmas uu ku qaatay, wuxuu dib ugu laabtay PSG oo uu wakhtigan kala qayb-gelayo safarka ciyaareed ee Maraykanka, laakiin waxa la aaminsan yahay in naadigiisu aanu dooneynin in uu la sii joogo.
3. Bacca (Milan)
Imaatinka Andre Silva ee kooxda AC Milan, waxay ka dhigan tahay in Carlos Bacca uu lumiyey booskiisii kooxda uu maalaha ka yahay Vincenzo Montella, taasina waxay dabada ka riixaysaa in inta uu suuqu furan yahay uu ka tago AC Milan. Laacibkan reer Colombia ee ay da’diisu tahay 30 jirka ayaa 13 gool u dhaliyey Milan xili ciyaareedkii hore. Bacca waxa doonaya kooxo ka dhisan waddanka Talyaaniga iyo Yurubta kaleba.
Ciyaaryahannada kale waxa ka mid ah:
4. Arda Turan (Barcelona)
5. Lucas Perez (Arsenal)
6. Renato Sanches (Bayern)
7. Ben Arfa (PSG)
8. Krychowiak (PSG)
9. Jovetic (Inter)
10. Nasri (Manchester City)
Arsenal vs Chelsea 2-2 – All Goals & Highlights – 3/1/2018 HD – English Commentary
Norwich City vs Preston North End 1-1 & All Goals And Highlights & Championship
Full Goals and Highlights: Chelsea 2-1 Everton
25/10/2017 Abdiwahab Ahmed